Soo-saareyaasha Qaybta Qalliinka Wadnaha iyo Warshadaha - Shiinaha Soosaarayaasha Qaybta Qalliinka Wadnaha
Qalabka qaboojiye ee xalka wadnaha ee qabow ee loogu talagalay isticmaalka keliya
Tirooyinkan taxanaha ah waxaa loo isticmaalaa qaboojinta dhiigga, qaboojinta xalka wadnaha iyo dhiigga oksijiinta inta lagu jiro hawlgalka wadnaha ee aragtida tooska ah.
Qalabka tuubbada wareegga dhiigga ee wareegga ah ee la tuuri karo ee loogu talagalay mashiinka wadnaha-sanbabada oo macmal ah
Badeecadani waxay ka kooban tahay tuubbada mashiinka, tuubada dhiiga wadnaha ee aorta, tuubada wadnaha ee bidix, tuubbada wadnaha midig, tuubada soo noqoshada, tuubada firaaqada, isku xiraha tooska ah iyo isku xiraha seddex geesoodka ah, waxayna ku habboon tahay isku xirka mashiinka wadnaha-sanbabada ee farsamada kala duwan. aaladaha si loo sameeyo wareegga nidaamka dhiig ee dhiigga inta lagu guda jiro wareegga dhiigga ee dheeraadka ah ee qalliinka wadnaha.
Mashiinka microembolus ee dhiigga loogu talagalay hal adeegsi
Sheygan waxaa loo adeegsadaa hawlgalka wadnaha iyadoo loo marayo aragtida tooska ah si loo sifeeyo microembolismyada kala duwan, unugyada aadanaha, xinjirowga dhiigga, microbubbles iyo walxaha kale ee adag ee wareegga dhiigga ka baxsan. Waxay ka hortagi kartaa xididdada dhiig baxa ee bukaanka waxayna ilaalin kartaa microcirculation dhiigga qofka.
Weelka dhiigga & shaandhada loo isticmaalo hal mar
Badeecada waxaa loo isticmaalaa qalliinka wareegga dhiigga ee ka baxsan wareegga dhiigga wuxuuna leeyahay shaqooyin keydinta dhiigga, miiraha iyo ka saarista xumbo; weelka dhiigga ee xiran & shaandhada ayaa loo isticmaalaa soo kabashada dhiigga bukaanka inta lagu guda jiro qalliinka, taas oo si wax ku ool ah u yareysa qashinka ilaha dhiigga iyadoo la iska ilaalinayo fursadda infekshinka dhiigga laga gudbo, si bukaanku u u helo dhiig isku kalsoon oo caafimaad leh .